Diiwan Baahi Duulimaadyada Diyaaradaha Gaarka ah ee Gaarka ah Si Aad U Sii Wadato KADHACAN
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diiwan Baahi Duulimaadyada Diyaaradaha Gaarka ah ee Gaarka ah Si Aad U Sii Wadato KADHACAN
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
69% dadka isticmaala duulimaadyada gaarka loo leeyahay ee hadda jira waxay filayaan inay duullimaad ka badan ka dib-COVID ka badan intii ka horreysay faafitaanka.
Kalabar dadka isticmaala duulimaadyada gaarka loo leeyahay ee hadda jira waxay sheegeen inay bilaabeen ama dib u billaabeen duulimaad khaas ah COVID-19 dartii.
54% isticmaaleyaashu waxay yiraahdeen waxay u adeegsadaan duulimaadyada khaaska ah safar shaqsi / fasax kaliya.
Isticmaalayaasha cusub waxay u badan tahay inay si adag u adeegsadaan duulimaadyada gaarka loo leeyahay safar shaqsiyadeed / fasax (64%).
Sahan hadda la sii daayay ayaa muujinaya baahida loo qabo duulimaadyada gaarka loo leeyahay inay sii socon doonto mustaqbalka dhow.
Qaar ka mid ah 69% dadka isticmaala duulimaadyada gaarka loo leeyahay ee hadda jira ayaa filaya inay duullimaad ka badan ka dib COVID ka hor intii aan la helin masiibada, iyadoo 28% ay sheegeen inay filayaan inay si gaar ah u duulaan heerar la mid ah. Kaliya 3% ayaa sheegay inay sameyn doonaan duullimaadyo khaas ah oo khaas ah adduun ka dib COVID.
Adeegga Laga Filayo ee Duulista Gaarka ah Kadib-COVID
U isticmaal Duulimaadyada Gaarka ah wixii ka dambeeya COVID intii ka horreysay ka hor COVID 69%
U adeegso Duulimaadyada Gaarka loo leeyahay sidii ka horreysay COVID 28%
U isticmaal Duulimaadyada Gaarka ah wax ka yar ka-dambeynta COVID ka hor intii aan la gaarin COVID 3%
Kalabar dadka isticmaala duulimaadyada gaarka loo leeyahay hadda waxay sheegeen inay bilaabeen ama ay dib u billaabeen duulimaad khaas ah sababo la xiriira Covid-19, iyo 100% waraaqahan cusub ee gaarka loo leeyahay ayaa sheegaya inay qorsheynayaan inay sii wadaan masiibada kadib. In ka badan kala bar (53%) ayaa sheegay inay si gaar ah u duuli doonaan xitaa ka dib markii uu faafay, 29% waxay ka korodhay 41% kuwaasoo sheegay inay sii wadi doonaan duulimaadyada khaaska ah si joogto ah sahanka January.
Baadhitaanka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday dhuumo adag oo ka mid ah macaamiisha diyaaradaha gaarka loo leeyahay ee cusub. In kabadan 225 jawaab bixiye, 90% hada waa xaashi khaas ah, 9% waxay sheegeen inay hada tixgalinayaan duulimaadyada gaarka loo leeyahay.
Marka laga hadlayo noocyada safarka, 54% waxay yiraahdeen waxay u isticmaalaan duulimaadka gaarka ah socdaalka shaqsi / fasax kaliya, 43% waxay u isticmaalaan isku darka duulimaadyada shaqsiyadeed / fasaxyada iyo ganacsiga, 3% waxay sheegeen inay u isticmaalaan duullimaadyada gaarka loo leeyahay gaar ahaan ganacsiga.